Umsebenzi weNtengiso yeVidiyo | Martech Zone
Wonke umntu wenza uqikelelo lokuphela konyaka. Ndicinga ukuba ungayiyeka yonke i-hoopla kwaye usebenze iqhinga lakho lokuthengisa kulo nyaka uzayo ngokusekwe kuzo zonke iinyani. Amaqhinga amajelo amaninzi, ukuthengisa ngokuzenzekelayo, iselfowuni kunye nevidiyo ziya kuqhubeka nokuqhuba ukuzibandakanya kunye nokugcwala kwishishini lakho. Nantsi i-infographic enkulu enezibalo ezimnandi ezixhasa iimfuno zakho zokuphumeza isicwangciso esisesikweni sokuthengisa ividiyo kwi-2014.
Izabelo Delos Inc Iingcebiso zeNtengiso yeVidiyo:
iplani -Ividiyo mayibe yinxalenye yesicwangciso sentengiso siphela, iqhinga lokuzibandakanya elixhasa iinjongo zakho. Ukuvelisa ividiyo entle akwanele- kuya kufuneka uyisebenzise! Chonga iinjongo zakho- nokuba ziphakamisa ulwazi okanye ukuqhuba ishishini- kunye nokuseka impumelelo yakho.
Velisa - Ngubani eyona ntengiso yakho kujoliswe kuyo kwaye yintoni uhlahlo-lwabiwo mali lwakho? Nje ukuba uphendule le mibuzo, fumana inkampani yokuvelisa ividiyo enokuzisa umbono wakho ebomini. Cinga ngokuqaqambisa abathengi abonelisekileyo okanye iinkonzo zakho ezizodwa.
Khuthaza - Beka umnqwazi wakho wentlalo kwaye uqale ukwabelana! Bathenga phi abathengi bakho? Zifumane kwaye usasaze igama. Cinga uFacebook, uTwitter, uLinkedIn, uGoogle +, uYouTube…
tags: ciscoIidosos zibandakanyiweeloquaemarketerFacebookfacebook ividiyokwi-infographicumthengisi weintanethiukuthengisa i-sherpaIiVidiyo zeNtengisoimithombo yeendaba yenkunguukuguqulwa kwevidiyoukuzibandakanya kwevidiyoukuthengisa ividiyoiqhinga lokuthengisa ividiyoIsicwangciso sevidiyoividiyo prukuveliswa kwevidiyoukwazisa ividiyoIsicwangciso sevidiyoiividiyoyoutube